Ukuthi udlani uma uhlushwa i-hypoglycemia? -I-Diabetes Talks-Sinocare
Ukuthi udlani uma uhlushwa i-hypoglycemia?
Isikhathi: 2019-10-24 Hits: 599
Ukudla okufanele sikukhethe ukwandisa ushukela wegazi lapho kuhlupheka kungakhuphula izinga likashukela? Ukudla okuhlukahlukene kunenkomba ye-glycemic ehlukile. Ukudla okunenkomba ye-glycemic ephezulu kubangela ushukela wegazi ukhuphuke ngokushesha. Phakathi kwazo, eliphakeme kakhulu yi-glucose (inkomba ye-glycemic yi-100), okulandelayo yisinkwa esimhlophe (i-88), uju (i-73), i-soda cracker (72), ushukela omhlophe (65), i-millet congee (62), ujusi we-orange (57) ), ushokoledi (49), i-apula Juice (41) neCoca Cola (40).
Lapho sihlushwa i-hypoglycemia, asidli kuphela ukudla okuqukethe amanoni amaningi noma amaprotheni (anjengo-ayisikhilimu). Ngoba amafutha angenza ukuthulula kwe-gastric kwehle futhi kwehlise ijubane indima yama-carbohydrate, okwenza ushukela wegazi ungeke ukhuphuke ngokushesha ngesikhathi esifushane, kepha ukugqugquzela kwe-hypoglycemia kuzoholela ekutheni iziguli ziqhubeke nokudla okuningi, okuholela ekuphathweni kanzima kweglucose yegazi.
Kudinga ukunaka lokho uma izidakamizwa ze-hypoglycemic zeziguli ziqukethe α- i-glucosidase inhibitor (efana ne-acarbose, iBasen, njll.), ayengezi amanzi amhlophe kashukela, ujusi wezithelo, amabhisikidi, i-bun eshisiwe nokunye ukudla nge-disaccharides noma isitashi. Ngoba le mishanguzo ingavimbela i-carbohydrate ibe ushukela, futhi futhi ayikwazi ukwelapha ngokushesha i-glucopenia. Ngakho-ke isiguli ngemuva kokuthatha α- I-glucosidase inhibitor kufanele ikhethe amaphilisi we-glucose noma amanzi kashukela lapho kwenzeka i-hypoglycemia.
Lapho glucose weziguli ezinesifo sikashukela ≤I-3.9mmol / L, badinga ukufaka ushukela noma ukudla okuqukethe ushukela. I-hypoglycemia enzima kufanele iqhube ukwelashwa okufanelekile ngokuya ngesimo sokuqwashisa nangoshukela wegazi. Lapho ushukela wegazi ≤I-3.9mmol / L, uma ukuqwashisa kwakhe kucacile, angathatha amagremu we-15-20 we-carbohydrate (i-glucose iyathandwa); Lindela imizuzu ye-15 ukukala ushukela wegazi, uma ushukela wegazi usekhona≤I-3.9mmol / L, bese udla amagremu we-15 kashukela, ulinganise ushukela wegazi futhi, ukuze uqiniseke ukuthi wedlula i-3.9mmol / L. Uma iziguli zinokuphazamiseka kwengqondo, kufanele sithinte ucingo oluphuthumayo esibhedlela ukuze belashwe. Amagremu we-15 wama-carbohydrate angaguqulwa abe kokudla okulandelayo: Amagremu we-15 we-glucose (noma inani elifanayo loshukela omhlophe, ushukela onsundu), amagremu we-20 uju, i-200 ml ye-orange Juice soda (noma inani elifanayo le-cola, i-lemade ), Ama-50 amagremu kasawoti we-orange, ama-25 amagremu wesinkwa (i-2 / 3 ucezu lwesinkwa), amagremu we-20 wama-biscuits (i-3 izingcezu ze-soda crackers) nokunye.
Ikhasi Langaphambili: Yini okufanele siyinake kwezemidlalo?
Ikhasi elilandelayo: Lapho izinga le ushukela wegazi lishesha kunokujwayelekile ...